Ma wanaagsan tahay in carruurta laga fisho wax badan? | Bezzia
Ma wanaagsan tahay in carruurta laga fisho wax badan?
Maria Jose Roldan | 17/09/2021 22:21 | Carruurta wax baro
Dhammaan waalidiintu way isku raacsan yihiin markay tilmaamaan korinta iyo barbaarinta ilmahaMa aha hawl fudud oo u baahan samir iyo dulqaad badan. Maskaxda ilmuhu way kobcaysaa waana hawsha waalidka inay ilmuhu yar yar helaan, si ay u awoodaan inay qabtaan waxyaabo kala duwan oo ka caawiya inuu helo madaxbannaani gaar ah.
Waa inaad taqaanaa sida loo samro oo aadan ka filayn inuu ilmahaagu wax barto markii ugu horeysay. Waalidiin badan ayaa inta badan la kulma dhibaatadan oo kale iyo waa in filashooyinkoodu ay aad uga sarreeyaan sida dhabta ah. Maqaalka soo socda ayaan kugula hadli doonnaa haddii ay wanaagsan tahay in la abuuro taxane laga filayo carruurta.
1 Muhiimadda ixtiraamka carruurnimada
2 Carruurtu waa carruur uun
Muhiimadda ixtiraamka carruurnimada
Qofna kuma dhasho isagoo og waana sababta ay carruurtu ugu baahan yihiin caawinta waalidkood marka ay timaaddo barashada waxyaabaha qaarkood iyo in koritaankooda heerka maskaxda uu yahay kan ugu habboon. Carruurtu waa inay waalidkood hagaan mar walba marka ay timaaddo barashada oo ay hubiso in sannadaha badan, ay bartaan inay isku filnaadaan oo ku tiirsanaadaan. Carruurtu waa carruur waalidkuna ma filan karaan in marka ugu horreysa ee ay is -beddelaan, ay garan doonaan sida loo hadlo oo loola xiriiro dadka kale. Carruurnimadu waa geedi socod dheer oo u baahan dulqaad badan waalidka, mar haddii aan wax walba hal maalin la baran.
Shaki kuma jiro in barbaarintu ay aad ugu daalin karto waalidka, laakiin tani ma aha mid u sarraysa kan yar in la mariyo dalab joogto ah. In kasta oo daalku jiro, waalidku waa inay u dulqaataan mar walba carruurtooda oo raacaan tilmaamaha lagama maarmaanka u ah horumarka iyo barashada.
Carruurtu waa carruur uun
Ma jirto wax ka abaal iyo nasteexo badan waalidiinta marka loo eego in ilmahoodu maalin walba wax cusub baranayo. Awood u lahaanshaha in la arko sida ilmuhu u korayo iyo in yar oo yar ayaa noqda mid isku filan runtii waa wax la yaab leh waalid kasta. Waa wax iska caadi ah in carruurtu mar walba qaladaad sameeyaan ilaa ay wax ka bartaan. Waa wax dabiici ah oo ku abtirsada aadamaha mana aha sababtan awgeed, waalidku waa inay ka tanaasulaan ama sabraan dulqaadka.
Carruurtu waa carruur oo keliya sidaas darteedna waa inay u dhaqmaan waxay yihiin. Waalidiintu waa inay dhinac iska dhigaan filashooyinka la abuuray oo ay ku raaxaystaan ​​carruurnimada carruurtooda. Muddo sanado ah, carruurtu way kori doonaan, hanaankooda wax -barashada iyo kobcintana waxay sii ahaan doonaan kuwo ku tiirsan keligood.
Marka la soo koobo, waalidiin badan ayaa maanta sameeya khaladka weyn ee ah inay u abuuraan rajooyin carruurtooda, kuwaas oo aakhirka aan si buuxda loo buuxin. Barashadu waa geedi socod aad u dheer oo u baahan dulqaad badan waalidka. Carruurta waa in loo oggolaadaa inay wax ku bartaan xawligooda iyagoon dareemin dalabka waalidkood. Carruurnimadu runtii waa marxalad cajiib ah oo nolosha ah, oo ay tahay in carruurta iyo waalidku ku raaxaystaan ​​si buuxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Carruurta wax baro » Ma wanaagsan tahay in carruurta laga fisho wax badan?
Dib -u -kicinta: 3 fikradood oo dib -u -warshadaynta dharka duugga ah
Ka faa'iidayso balastarka guriga